Ekwentị / Whatsapp / WeChat: 0086-13933032315
Osisi Uto Regulator
Otu esi eji Difenoconazole n'ụzọ ziri ezi？
site ha na 21-03-10
A na-ejikarị Difenoconazole mee ihe maka ịgba na osisi mkpụrụ osisi, na ịgba n'ihu ma ọ bụ na mmalite nke ọrịa ahụ nwere mgbochi na njikwa kachasị mma. ★ Citrus ọrịa na-sprayed banyere 2 ugboro ọ bụla nke oge opupu ihe ubi oge ịse ibu oge, okpomọkụ oge ịse ibu oge, na-eto eto f ...
Akwa-arụmọrụ, Low-toxicity, Broad-spectrum fungicide-Difenoconazole
Difenoconazole bụ nnukwu arụmọrụ, nchekwa, obere nsị, fungicide sara mbara, nke enwere ike itinye ya na osisi ma nwee mmetụta osmotic siri ike. Ọ bụkwa ngwaahịa na-ekpo ọkụ n'etiti ihe ndị na-egbu egbu. Site na nbibi njikọ nke mgbidi cell nke nje, ọ na - egbochi ...
Ọrịa na Tomato
site ha na 21-01-11
N'ime afọ abụọ gara aga, ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-akọ nri akụwo ụdị dị iche iche na-eguzogide nje iji gbochie omume ọrịa ọrịa tomato. Otú ọ dị, ụdị ụdị a nwere otu ihe, ya bụ, ọ naghị akwụsi ike na ọrịa ndị ọzọ. N'otu oge ahụ, mgbe ndị ọrụ ugbo na-azụkarị nri ...
Onye na-ahụ maka ihe ọkụkụ na-eto DA-6
Diethyl aminoethyl hexanoate (DA-6) bụ onye na-ahụ maka ihe ọkụkụ sara mbara nke nwere ọtụtụ ọrụ nke auxin, gibberellin na cytokinin. Ọ bụ soluble na mmiri na organic solvents dị ka ethanol, ketone, chloroform, wdg Ọ bụ anụ na nchekwa na ụlọ okpomọkụ, mụ n'okpuru anọpụ iche na a ...
The thiamethoxam na nke imidacloprid
Iji belata mbibi nke ụmụ ahụhụ na-ebute ihe ọkụkụ, anyị ewepụtala ọtụtụ ọgwụ ahụhụ dị iche iche. Usoro nke mmekpa ahụ dị iche iche bụ otu, yabụ kedu ka anyị ga-esi họrọ ndị dabara adaba maka ihe ubi anyị? Taa, anyị ga-ekwu maka ụmụ ahụhụ abụọ nwere ...
No.158, Huaian East Road, Yuhua District, Shijiazhuang, China